Kabtan Iniesta Oo Si Aan La Filayn Uga Jawaabay Inuu Ka Shalayn Doono Hadii Uu Ka Tago Barca %
Kabtanka kooxda kubada cagta Barcelona ee Andres Iniesta ayaa wuxuu xaqiijiyay inuu hada ka fikirayo soo gaba gabaynta waayihiisa kubada cagta, gaara ahaan Bluagrana, oo uu ku sugan yahay wax ka badan Tobban sano laga soo bilaabo bilowga mihnadiisa.
Iniesta ayaa mudada uu Barcelona joogay wuxuu kula guuleystay koobab fara badan oo ay ugu waa weyn yihiin, La Liga, Champions League iyo waliba kuwa – Marka dhanka Spain la aado wuxuu la qaaday wadankiisa koobab kale.
Xidigaan ayaa wuxuu kaloo qiray in koobka aduunka ee 2018, kasoo dalka Ruushka uu marti gelin doono uu yahay kiisii ugu dambeeyay ee uu qarankiisa metalo, laakiin wuxuu cadeeyay in wali uusan go’aamin ka tegista Barcelona.
“Hadii aan baxo, waxay sababta noqon doontaa in aanan ciyaaryahan ahaan iyo waliba shaqsi ahaan aan kooxdeyda usiin karin wax walba si Boqolkiiba boqol ah,” ayuu Andres Iniesta ku sheegay wareysi uu siiyay Idaacadda Spain laga leeyahay.
“Wuxuu noqon doonaa, go’aan aan ka qoomamayn doono [aan ka shalay doono] hadii aan ka tago Barcelona, maxaa yeelay waan jeclahay,” ayuu hadalkiisa kusii daray Iniesta.
“Laakiin waxaan sanadkaan ahay mid aan uxasiloon iyo waliba mid aad ugu raaxaysanaya guulaha aan gaarayno,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Iniesta oo lagu tilmaamo mid kamid ah Cabqariyiinta kubada cagta.